Jurgen Klopp Oo Faahfaahin Ka Bixiyey Murankii Dhax-maray Jordan Henderson Ee Sababay Inuu Qolka Labbiska Ka Dhex Ooyo – Cadalool.com
Jurgen Klopp Oo Faahfaahin Ka Bixiyey Murankii Dhax-maray Jordan Henderson Ee Sababay Inuu Qolka Labbiska Ka Dhex Ooyo
Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ka hadlay murankii iyo khilaafkii laynka garoonka Old Trafford ku dhex-maray kabtanka kooxdiisa Jordan Henderson daqiiqaddii 72aad ee ciyaartii Axaddii ay barbarraha goolal la’aanta ah ku kala baxeen.
Klopp oo uu wargeyska The Sun sheegay inuu qolka labbiska ka dhex ooyay kaddib dhamaadka ciyaartaas, ayaa hadda si buuxda uga hadlay wixii dhex-maray Henderson.
Tababaraha Liverpool oo ciyaartaas cadho weyn ka muuqatay, ayaa waxa kale oo uu hadallo kulul u miisay macallinka Manchester United xilligii ay is-gacan qaadayeen dhamaadka ciyaarta, isla markaana ay qolka labbiska isku dhex qabsadeen weeraryahanka reer Senegal oo Sadio Mane, ka hor intii aanu canaan badan huwinin Henderson, kaddibna aanay ilmo kasoo daadanin indhihiisa.
Jurgen Klopp ayaa la sheegay inuu Henderson ku eedeeyey inuu kulankaas iska soo xaadiriyey iyadoon xattaa lagu samaynin tijaabo la xidhiidha maandooriye, taas oo ka dhigan inuu ula jeeday inuu sakhraansanaa.
Haddaba, Jurgen Klopp oo arrintaas wax laga weydiiyey ayaa qirtay in loo sheegay inuu ku qayliyey Henderson iyo Mane, laakiin ay arrintaasi been tahay.
“May jirin wax ciyaarta kaddib ka dhacay qolka labbiska ama meel kale. Qof ayaa igu yidhi, waxa jira warar sheegaya inaad ku qaylisay Hendo iyo Sadio markii aad qolka labbiska ku jirteen. Waan qayliyey, laakiin Hendo halkaas maba joogin, waxa lagu samaynayey tijaabo la xidhiidha daroogo (daawooyinka awoodda kordhiya).” Sidaas waxa yidhi tababare Klopp oo uu soo xigtay wargeyska Mirror.
“Waxba may dhicin ciyaarta kaddib, dhamaantayona waanu fiicnayn. Waxaanu ka hadlnay ciyaarta iyo fursadihii aanu helnay, wixii aanu qabanay kaddibna guryahayagii ayaanu u dhaqaaqnay.” ayuu ku daray.
Taageereyaasha Liverpool ayay farxad u noqon kartaa inay maqlaan in aanu wax khilaaf ahi ka dhex dhicin tababarahooda iyo kabtankooda, kuwaas oo ay ku hamiyeyayaan inay u horseedaan koobka Premier League oo ay ka qatanaayeen muddo 29 sannadood ah.